Somalia:Dagaal ka dhacay Ceel Waaq | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > TFG Somalia, WARARKA	> Somalia:Dagaal ka dhacay Ceel Waaq
Somalia:Dagaal ka dhacay Ceel Waaq
Dagaal ku dhacay Ceel Waaq, Xarakada Alshabaab oo la wareegtay & Qasaarihii ka dhashay + Wakaaladaha Wararka.
Wararka laga helayo magaalada Ceelwaaq ayaa ku soo waramaya in dagaal uu ka dhacay Magaalada Ceelwaaq ee ku taal xuduuda Soomaaliya la leedahay Waddanka Kenya,dagaalkaas oo dhexmaray ciidanka dawladda Somaliya iyo xarakada Mujaahidiinta Alshabaab,sidaana waxaa sheegtay BBCda iyadoo sheegtay inay kasoo xigatay goobjooge aan is magacaabin oo uu waraystay wariye Catoosh oo BBC da uga soo warama Kenya.
Saddex Asbuuc ka hor ayaa ciidanka dawladda laga qabsaday tuulada Bursaar oo 31KM uu jirta magaalada Ceelwaaq oo dhinaca Bari kaga toosan magaalada Ceelwaaq.
Magaalada Ceelwaaq waxaa dagaal kula wareegay Xarakada Alshabaab,Ciidamada Dawladda lama garanayo meel ay ku sugan yihiin
Labada dhinac ee dagaalamay wali war kama soo saarin dagaalkaa.
Warka goobjoogaha ayaa wuxuu intaa ku darayaa in saaka waabarigii dagaal seddex geesood ah ay xarakadu ku soo qaadeen fariisimadii ay ciidamadu dawladdu ku lahaayeen magaalada Ceel waaq.
Dagaalkaas ayaa la sheegay inuu socday in ka badan 4 saacadoood, ayna halkaa kula wareegeen saldhiggii ciidanka Dawladda ,iyagoo halkaa ku qabsaday 4 baabuur oo tigniko ah.
Qasaaraha halkaa ka dhashay ayaa lagu soo waramayaa in dagaalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda,kuna dhawacmeen in ka badan, oo dhinacyadii dagaalamayay ah.
Sarkaalkaas ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dhaawac markii hore lageeyay isbitaal dhinaca Ceelwaaq Kiinya ah,uuna halkaa ku geeriyooday.
Warar kale oo warbaahintu siidaysay ayaa sheegaya in ay jiraan qax iyo guryo gubtay oo xabdii haleeshay.
Sarkaalka geeriyooday ee dinaca Dawladda ah ayaa la sheegay in lagu magacaabo Cabdulaahi Gamaas
Goobjooge kale oo u waramay Idaacada VOA ayaa sheegay in magaalada ay ka maqlayaan xabado goos goos ah, ayna magaalada gacanta ugashay xarakada Alshabaab,ciidanka Dawladdana ay joogaan hareeraha,lagana cabsi qabo in uu dhaco dagaal rogaal celis ah oo ay soo qaadaan ciidanka dawladdu.
Waxaan ugu baaqaynaa garabyada dagaalamaya in la joojiyo dagaalada,ragana la badbaadiyo,wadahadalna lagu dhameeyo waxyaalaha laysku diidan yahay.
Waxaana baqdin kaqabnaa oo dareenkayagu na siinayaa in uu jiro oo uu soo socdo dagaal faragalin ah oo wata magaca “Macaluusha” ama “gudbinta gargaarka” uu Soomaaliya ku soo wajahan yahay,gaar ahaan deegaanada ay ka taliyaan mucaaradka dawladda ama Koonfurta Soomaaliya.
Soomaaliyay haddaad tashan weydaan saw la’ idiin talin maayo,mise anigaa khalad fahmay bal qoraaladan akhri:
Tags: Ceelwaaq, dagaal, Dagaalka Ceelwaaq, Muqdisho, SOMALIA
Japan:Disaster recovery still elusive AFGHAN:50 US soldiers wounded in Afghanistan suicide attack